Lavin’ny Google Ny Filazàn’ny Media Rosiana Momba Ny Hetsika Angon-drakitra Fijerena Toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2015 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Taorian'ireo tatitra tany anaty media Rosiana nanamafy fa hoe noforitra ny Google teo anoloan'ireo fangatahan'i Rosia ary niroso tamin'ny fitahirizana ny angon-drakitra momba ireo Rosiana mpampiasa azy ho ao anaty lohamilina iray ao amin'ny firenena, dia nolavin'ireo solontenan'ny Google ireny filazàna ireny ary nolazainy tamin'ny Global Voices fa “tsy mitombina”
Ny herinandro talohan'ny 13 Aprily, notaterin'ny masoivohom-baovao RBC fa toa re siosio ho nanaiky hiforitra tamin'ilay lalàna Rosiana ho fanangonana angon-drakitra ny Google ary efa nanisaka sahady ny sasantsasany amin'ny momba ireo mpampiasa azy ho any amin'ny foibe fitehirizana angon-drakitra any amin'ny tanin'ny Rosiana. Nolazain'ny RBC fa tamin'ny kaonferansa nataon'ny Minisiteran'ny Fifandraisana Rosiana no nivoahan'izany, tamin'ny Martsa lasa teo, izay afaka nahazoan'ny RBC dika. Notaterin'ny RBC fa solotena iray avy amin'ny Rostelecom, iray amin'ireo lohany amin'ny fanomezana tolotra fifandraisan-davitra ao Rosia, no niteny fa nokaramain'ny Google mba hitahiry ireo angon-drakitr'izy ireo ao aminà “lohamilin'ny toerana iray faran'izay tsara aro indrindra sy manana fifamatorana manokana amin'ny fanjakàna.” Saingy taorian'ny zava-nisy, nandà tsy hitondra fanehoankevitra ny Rostelecom.
Nifandray tamin'ireo mpanao ny politikan'ny Google ny Global Voices mba haka fanazavana momba ilay fitakiana. Nolazain-dry zareo fa “tsy mitombina” ireo tatitra momba ny Google hoe nitahiry angon-drakitra any Rosia, fa tsy nanome antsipirihany kosa momba izay fihetsiky ny Google na zavatra nataony nanoloana ilay lalàna momba ny fanangonana angon-drakitra sy ireo fitakiany.
Ny fandavan'ny Google tsy hiara-miasa amin'ny manampahefana Rosiana dia tonga manampy trotraka ireo tatitra mikasika orinasa hafa, toy ny eBay sy PayPal, nanaiky ny hitahiry ny angon-drakitra momba ireo Rosiana mpampiasa azy any Rosia, araka ny voafaritr'ilay lalàna vaovao momba ny fitehirizana angon-drakitra niditra nanan-kery tamin'ny 1 Septambra 2015.
Raha nodisoin'ny loharanon'ny RBC ny hetsika nataon'ny Google tamin'ity tranga ity, dia betsaka ny fanontaniana no mbola tsy voavaly. Maninona no nanao izany ry zareo? Iza no hahazo tombony amin'ny fandisoana zavatra tahaka izany? Azo antoka irian'i Rosia ny hanajàn'ireo orinasa iraisampirenena mpanome tolotra aterineto miasa any Rosia ny lalàna vaovao vao napetrany, ary ny fananany ireo orinasa manana mpanjifa betsaka toy ny Google ho eo anilany dia tena ho tombony lehibe tokoa. Saingy tsy hanampy na iza na iza ny fisisihana amin'ny hoe nanaiky ireo fangatahana momba ny Angon-drakitra fijerena toerana ny Google, nefa tsy nanao izany akory ry zareo, ary tsy hanao afa-tsy ny hanome sary ireo Rosiana manampahefana ho toy ny kivy kokoa amin'ny fikatsahany hampitombo ny fifehezana ireo hetsiky ny Rosiana mpampiasa aterineto.